Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Albaabkii Isbadalka Geeska Afrika ee London Kafurmay 24 Feb, Maxaa Laga Fahmi karaa? By: Xaaji.
Faallo: Albaabkii Isbadalka Geeska Afrika ee London Kafurmay 24 Feb, Maxaa Laga Fahmi karaa? By: Xaaji.
BISMILLAAH- Akhyaarta sharafta leh ee ku xidhan Qoraaladayda waxay maanta ila wadaagayaan mawduuc ku cusub saaxada halgamada lagaga soo horjeedo kooxda kaligood cunayaasha ah ee Tigreega iyo kooxaha dadkoodii iibsaday ee kudaba,lifaaqan.
Halgamayaal qoowmiyadii abid ugu qalafsanayd oo gaalo islaamba layaabeen Afrika gudaheeda waxay noqotay Qowmiyadda Tigreega. Markuu warku saxiix yahay waxaa shardi ah inay dad badani isku raacaan, sidaa darteed inay eedaasi jirto waxaan ku cadayn karaa- waxaa isku raacay umado kala duwan oo kala Af iyo hayb ah.
QoladuWaa nooc wata dhaqan xumo iyo naxariisdarro aan horay loogu arag Afrika. Waxay dhanka dabeecadda kashabahaan xayawaanka loo yaqaano Hangaralaha ama Dibqalooca ee qaniina wixii usoo dhawaada xataa hadii lagu yimaado in la caawiyo. Kuma sii dheeraanayo tilmaantooda oo waa la ogyahay inay dhibaateeyeen guud ahaan umadda soomaaliyeed meel ay joogtaba. Dadka ay laayeen lama tirin karo, kuwa ay dhaawaceen ee ay soodhka galiyeen ama ay xubin ka goosteen ee meelaha daadsana ilaahay umbaa xisaabi kara!
Waxaa iska caadi ah cidii malageed galo inay lugaheeda kutimaado meeshii ay ku dhiman lahayd, sidaa darteed kooxdii Woyaanha ee huwaneyd magaca TPLF wuxuu malgood galay kolkay isku taabteen caasimadii Oromada ee Finfine balse hadeer loo yaqaano Adis Ababa.
Waxaa kale oo kamid ah calaamdaha muujinaya inuu malagoo galay waxay isku taabteen caasimadii Axmaarada ee Bahirdar. Dadka soomaalida ahi dagaal qadhaadh ayay lagaleen taliska woyaanaha, laakiin waxay aaminsanyihiin in dagaalkaasi yahay mid aad uga fog ubucda waxa loogu yeedho itoobiya.
Sababka kacdoonku waxaa weeye inuu halgankii umadda soomaaliyeed garaacay Geedkii Qudhaanjada badnaa ee lawada saaraa ee caruurtu odhan jirtay Qudhaanjooy Geelaagii laqaad!. Taasi waxay dhaxalsiisay woyaanihii inay Sadexdii sano ee udambaysay islawaayaan Gacanta iyo Afka!, bal kawaran adigoo wax cunaya hadaad cuntadii Dhagaha iska galiso adigoo Afkii kuwaday ! waa xaalka jaahwareer ee ay ku suganyihiin Nacasyadii Buuralayda Maqale kasoo duulaay!.
Waxaa hadda banaanka yaala inay kooxdu kudhex hafanayso malaayiin cadheysan oo kusoo butaacday.
Waxaad la socotaan inay aqoonyahanadii kadhashay qowmiyadaha hadh iyo habeemba la xasuuqayo ay qoriga iyo qalinkaba ku dagaalamayaan kuna fureen furimo siyaasadeed oo dibadda kasocda iyo kuwo gudaha kasocdaba. Waxaa si gaar ah isu kaashaday 5 Urur oo labaxay magaca PAFD oo ilaa intii la asaasay horay uqaaday talaabooyin wax ku oola. Lafdhabarta qoraalka iyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee ay wajahayaan kooxda TPLF waxaa kamid ah Shirkii kadhacay Caasimadda wadanka Ingriiska ee London 24-25 Feb, kaas oon lagu timaami karo inuu ahaa Albaabkii ugu halista badnaa ee kufurma maamulka guumaysiga ee xooga ku haysta mandiqada. Shirkan oy isugu yimaadeen in kabadan 10 Urur wuxuu gogol xaadh u ahaa Dawalad wadaag ah oo cusub oo meesha kasaarta kooxda TPLF/EPRDF ee fashilantay.
Aan hoos usii dagee istraajiyadda ay Ururada xaq udirirka ahi ay ciyaareen ayaa ah inay isfahmeen iyaga iyo Goobihii ama Xafiisyadii laga caawin jiray maamulka woyaanaha ee kuyaalay wadamada Reer Galbeedka. Waxaad lawada socotaan inayna siyaasaddu lahayn saaxiibnimo waarta, balse ay leedahay isku danaysi .
Inuu shirkaasi qabsoomo ma’ahayn arrin sahlan, kumana imanin si fudud ee waxaa loo isticmaalay juhdi culus oo kayimid midowga PAFD. Waxaa shirka kasoo qeyb galay xubno muhiim Reer galbeed ah, hadaynaba ahayn kuwii fadhiyay Xafiisyada laga taageero maamulka Woyaanaha. Shirka waxaa kasoo baxay qodobo kanixiyay Woyaanaha, waxaase iila sii muhiimsanaa in lasameeyay Mapkii lagu hawlgali lahaa iyo gudidiiba.
Waxaan hoosta ka xariiqayaa in Ururwaynaha ONLF uu sheekh kayahay Albaabkan halista ah ee kafurmay London ujeedkiisuna yahay in lagaadho isbadal dhanka siyaasadda ah oo lataaban karo. Waxaa xusid mudan Waqtiga uu shirkani kusoo aaday inay tahay goor aan dawlad laheegaa kajirin Itoobiya.
Intii uu jiray taliska TPLF wuxuu hagardaamo ugaystay wadamada jaarka ah oo majiro xuduud uuna katalaabin kuna soo laynin dad masaakiin ah. Ciidankoodu wuxuu udhaqmaa sida mooryaanta, mana jiro sharci kaceliya dilka, dhaca hantida iyo kufsiga Dumarka, sidaa darteed ayay wadamada Geesku tiigsanayaan inuu taliskaasi meesha kabaxo.
Gabagabadii hadaan gun iyo baarba isu geeyo shirkii London oo ahaa miday Albaabka isu xidheen masuuliyiin Cadaan iyo Madowba leh, wuxuu Nuxurkiisu ahaa badbaadinta shucuubta ku hoos dulman kooxda TPLF/EPRDF.
HEES WACAN- NIN LAGU SEEXDOOW HASEEXAN, XILBAAD SIDAA HASEEXAN, SOOJEEDOO HASEEXAN–!
Xaaji M/rashiid Aw Macalim.